ခယျြလျဆီး 2:0 အဲဗာတနျ ပှဲအပွီး မှတျမှတျရရ ထူးခွားစှာ ထုတျနုတျပွောစရာ အခကျြ ၇ ခကျြ – Sports A2Z
စာရငျးအလှညျ့အပွောငျးကွမျးတဲ့ တူဟယျလျရဲ့ မူဝါဒ
ခယျြလျဆီးနညျးပွဘဝအခြိနျတိုအတှငျးမှာ တူဟယျလျအဓိကလုပျခဲ့တာက လူစာရငျးအလှညျ့အပွောငျးကို ခပျကွိမျးကွမျးလုပျခဲ့တာဖွဈသလို သူကိုယျတိုငျကွိုကျနှဈသကျတဲ့မူဝါဒလို့ ဆိုပါတယျ။ သူ့လုပျငနျးစဥျအတိုငျး ဒါကအလုပျဖွဈတယျ။ ခယျြလျဆီးကစားသမားတှကေို ပှဲဆကျမောပနျးမှုနဲ့ လုပျအား ဝနျမပိစသေလို ဘယျကစားသမားကို ဘယျလိုသုံးမယျ၊ ဘယျလောကျထိသုံးလို့ရတယျဆိုတာကို တဖကျကခြဥျးကပျနတေဲ့သဘောဖွဈတယျ။ ဒီနအေဲ့ဗာတနျနဲ့ပှဲမှာ လီဗာပူးလျနဲ့နိုငျပှဲက လူစာရငျးကို ၅ နရောအထိ အပွောငျးအလဲလုပျပွီး ခယျြလျဆီးကပှဲထှကျလာတယျ။ လူစာရငျးနှဈနရောလောကျသာ အပွောငျးအလဲရှိခဲ့တဲ့ အနျဆလော့တီကို အဲဗာတနျကို သကျသောငျ့သကျသာ အနိုငျကစားပွီး ပွိုငျဘကျထကျ ပိုအလုပျကွိုးစားတဲ့ ကစားပုံကို တှခေဲ့ရတယျ။ သူ့ရဲ့မူဝါဒက အလုပျဖွဈနတေယျလို့ မှတျခကျြခရြမှာပါ။
စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြအိပျမကျဆိုးမှာ ၂၅ နှဈကွာ ပိတျမိနဆေဲ အဲဗာတနျ
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြကှငျးက အဲဗာတနျရဲ့ အိပျမကျဆိုးဖွဈလာခဲ့တာဟာ နှဈတှကွောညောငျးလာခဲ့ပါပွီ။ ခယျြလျဆီးကို ဒီကှငျးမှာ နောကျဆုံးအနိုငျရခဲ့တာက လှနျခဲ့တဲ့ ၂၅ နှဈကဖွဈပွီး ဒါကအံ့အားသငျ့စရာကောငျးလှတဲ့အခကျြပါ။ ပထမအကြော့အိမျကှငျးမှာ အနိုငျရခဲ့တဲ့ အဲဗာတနျက အကွောငျးမလှစှာနဲ့ပဲ လကျဗလာနဲ့ ခေါငျးငိုကျစိုကျခြ အိမျပွနျခဲ့ရတဲ့ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြနောကျတပှဲဖွဈခဲ့ပွီး ပိုကောငျးတဲ့အသငျးက ခယျြလျဆီးဖွဈခဲ့တာကိုလညျး အနျဆလော့တီ စိတျပကျြလကျပကျြနဲ့ လကျခံရမယျ့ အမှနျတရားပါပဲ။
အလုပျအရမျးကွိုးစားတဲ့ မဆုတျမနဈ ခယျြလျဆီးခံစဈ
ခယျြလျဆီးဟာ တူဟယျလျရဲ့လကျအောကျမှာ ၁၀ ပှဲကစား၊ ရှုံးပှဲမရှိတဲ့အပွငျ ၈ ပှဲက Clean Sheet ရတဲ့အထိ ခံစဈကွောငျးက ပွောငျမွောကျခဲ့တယျ။ ဒီလိုအသငျးက အဲဗာတနျကိုလကျခံကစားခဲ့တာဖွဈပွီး Clean Sheet နောကျတပှဲကို ထပျယူခဲ့တယျ။ အလုပျအရမျးကွိုးစားပွီး မဆုတျမနဈတဲ့ ခယျြလျဆီးရဲ့ ခံစဈမာကြောမှုက တူဟယျလျရဲ့ အသီးအပှငျ့တှဖွေဈလာတယျ။ သူ့အတှကျလကျသီးလကျမောငျးတနျးခငျြစရာပါ။ ခံစဈမှာ နောကျခံအထိုငျ ၃ ဦး ကစားကှကျနဲ့ တောငျပံအစှနျလူတှရေဲ့လုပျအားကို အားပွုကစားတဲ့ သူ့ရဲ့ကစားကှကျဖှဲ့စညျးပုံက ခယျြလျဆီးခံစဈကို အခုလိုအဆငျ့အတနျးရောကျလာစခေဲ့တယျ။ သူ့ရဲ့သငျပွမှုအောကျမှာ ခယျြလျဆီးအသငျး​က စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြကှငျးမှာ ပေးဂိုး သုညပါ။ အသိအမှတျပွုရမယျ့ မှတျတမျးဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ အဲဗာတနျတိုကျစဈ ဦးကြိုးခဲ့သလို ခယျြဆီးက တိုကျစဈကိုပါ ဒေါငျးတငျမောငျးတငျကစားနိုငျခဲ့တာ တှခေဲ့ရတယျ။ သာလှနျတဲ့စှမျးဆောငျရညျဖွဈပါတယျ။
ရာသီတာထှကျမှာ ကဲလျဗတျ လူဝငျရဲ့သှငျးဂိုးတှနေဲ့ တိုကျစဈပိုငျးစိုပွညျပွီး အန်တရာယျပေးနိုငျခဲ့တဲ့ အဲဗာတနျဟာ ဂိုးတှမွေူးခဲ့တယျ။ သူဒဏျရာရပွီးနောကျပိုငျး လကျရှိအနအေထားနဲ့တော့ မိုးနဲ့မွကှောသှားခဲ့ဖွဈတယျ။ အားကိုးစရာ တိုကျစဈမှုးပြောကျဆုံးနတောကို တှရေ့တယျ။ ဖဖေျောဝါရီနောကျပိုငျးမှာ ဂိုးသှငျးဖို့ ရဈခြာလီဆနျ တဦးတညျးကို မှီခိုလာရလို့ တဖွညျးဖွညျး ဇယားအောကျကိုဆငျးလာရတယျ။ ဒဏျရာခဏခဏရတဲ့ ဟာမီးဈ ရိုဒရီဂှကျဇျရဲ့ မပါဝငျနိုငျမှုကလညျး အဲဗာတနျတိုကျစဈကို အကအြဆုံးမြားစပေါတယျ။
ပွငျးထနျတဲ့ ​နရောလုတိုကျပှဲမှာ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့တနရောနဲ့ထိုကျတနျကွောငျးပွသတဲ့ ခယျြလျဆီး
အဆငျ့ ၄ နရောနဲ့ အဆငျ့ ၅ နရောကအသငျးတို့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့တဲ့ ဒီပှဲမှာ နိုငျသူစားစတမျးဆိုတဲ့ အခွအေနပေါ။ ခယျြလျဆီးကဒါကိုသကျသပွေခဲ့တယျ။ အဲဗာတနျကိုအနိုငျယူပွီး ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့တနရောနဲ့ ထိုကျတနျကွောငျး လကျခမောငျးခတျပွလိုကျတယျ။ ခယျြလျဆီးက အဆငျ့ ၄ နရောကို တကျလာပွီ။ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ တိုကျပှဲက အခုထကျပိုပွငျးထနျလာပါဦးမယျ။ လီဗာပူးလျက ဆကျတိုကျရှုံးနတေယျ။ ဝကျဈဟမျးက ပှဲကနျြကစားဖို့ ရှိနသေေးတယျ။ ခယျြလျဆီးအတှကျ အ​ခွအေနအေားသာနတေယျ။ အဲဗာတနျရဲ့လကျကနျြပှဲက ခယျြလျဆီးကို ပွနျကြျောဖွတျလို့ရတဲ့ အနအေထားရှိပမေယျ့ ခွစှေမျးထိုးတကျနတေဲ့ ခယျြလျဆီးက လာမယျ့ ဝကျဈဟမျးနဲ့ လိဒျဈတို့ကို အနိုငျကစားပွီးတဲ့အခါ အဆငျ့ ၄ နရောနဲ့ ပိုထိုကျတနျတဲ့ အသငျးအဖွဈ ရပျတညျလာဖို့သာ ရှိပါတယျ။
ဒီပှဲမှာ သူကအလုပျကောငျးကောငျးမှနျမှနျလုပျခဲ့ပွီး သသေသေပျသပျလေး ကစားပွခဲ့တယျ။ မဆေနျမောငျ့နဲ့နရောမှာ ကစားခှငျ့ရလာတယျ။ ရတဲ့ ပှဲထှကျအခှငျ့အရေးကို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ဆုပျကိုငျပွီး အဲဗာတနျဧရိယာထိပျမှာ ကောငျးကောငျးဒုက်ခပေးနိုငျခဲ့တယျ။ ပှဲထှကျခှငျ့နဲ့ ထိုကျတနျကွောငျး သကျသပွေခဲ့တဲ့ ခိုငျဟာဗတျဇျက ကိုယျတိုငျ တဂိုးသှငျးယူခဲ့ပမေယျ့ ဒိုငျ ဒေးဗဈကူတီရဲ့ ပယျဖကျြခွငျးကိုခံခဲ့ရလို့ နဈနာခဲ့ရတယျ။
အဆငျ့ ၂ နရောကို တူဟယျလျ ခြိနျနပွေီလား?
ခယျြလျဆီးရဲ့အထကျက အသငျးတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျ မနျစီးတီးကိုဖယျလိုကျတဲ့အခါ အဆငျ့၂ နရောအထိ လှမျးခုနျတကျလို့ရတဲ့ ခရီးလမျးကွောငျးက ဖွောငျ့ဖွူးနတောတှရေ့တယျ။ သာမနျ အဆငျ့၎ အတှငျးဝငျရုံနဲ့ ကနြေပျမလား၊ ပရီးမီးယားလိဂျ အဆငျ့ ၂ နရောအထိ သိမျးပိုကျမလားဆိုတာကို တူဟယျလျ ဆုံးဖွတျပါလိမျ့မယျ။ လကျရှိခွစှေမျးအတိုငျး ထိနျးသိမျးထားပွီး လကျကနျြ ၁၀ ပှဲမှာ ရမှတျအမြားဆုံးစုဆောငျးသှားနိုငျရငျတော့ အသငျးရဲ့ရာသီသိမျးက အခုထကျပိုလှပဖို့ ရှိနပေါတယျ။ အခွားအသငျးတှထေကျ လူစာရငျး ပိုတောငျ့တငျးနတေယျ။ တူဟယျလျရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးထားနပွေီဆိုရငျတော့ အဆငျ့ ၂ နရောအထိ ခယျြလျဆီးကိုပို့ဆောငျနိုငျခဲ့ရငျ သူ့ရဲ့ ခယျြလျဆီးနညျးပွဘဝအစက မကျြနှာပနျးလှပွီး ပွောစမှတျဖွဈလာပါစလေိမျ့မယျ။
စာရင်းအလှည့်အပြောင်းကြမ်းတဲ့ တူဟယ်လ်ရဲ့ မူဝါဒ
ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဘဝအချိန်တိုအတွင်းမှာ တူဟယ်လ်အဓိကလုပ်ခဲ့တာက လူစာရင်းအလှည့်အပြောင်းကို ခပ်ကြိမ်းကြမ်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်သလို သူကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မူဝါဒလို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ချယ်လ်ဆီးကစားသမားတွေကို ပွဲဆက်မောပန်းမှုနဲ့ လုပ်အား ဝန်မပိစေသလို ဘယ်ကစားသမားကို ဘယ်လိုသုံးမယ်၊ ဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကို တဖက်ကချဉ်းကပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာ လီဗာပူးလ်နဲ့နိုင်ပွဲက လူစာရင်းကို ၅ နေရာအထိ အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးကပွဲထွက်လာတယ်။ လူစာရင်းနှစ်နေရာလောက်သာ အပြောင်းအလဲရှိခဲ့တဲ့ အန်ဆလော့တီကို အဲဗာတန်ကို သက်သောင့်သက်သာ အနိုင်ကစားပြီး ပြိုင်ဘက်ထက် ပိုအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ ကစားပုံကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့မူဝါဒက အလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ မှတ်ချက်ချရမှာပါ။
စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျအိပ်မက်ဆိုးမှာ ၂၅ နှစ်ကြာ ပိတ်မိနေဆဲ အဲဗာတန်
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျကွင်းက အဲဗာတန်ရဲ့ အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်လာခဲ့တာဟာ နှစ်တွေကြာညောင်းလာခဲ့ပါပြီ။ ချယ်လ်ဆီးကို ဒီကွင်းမှာ နောက်ဆုံးအနိုင်ရခဲ့တာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်ကဖြစ်ပြီး ဒါကအံ့အားသင့်စရာကောင်းလှတဲ့အချက်ပါ။ ပထမအကျော့အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အဲဗာတန်က အကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲ လက်ဗလာနဲ့ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျနောက်တပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး ပိုကောင်းတဲ့အသင်းက ချယ်လ်ဆီးဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း အန်ဆလော့တီ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ လက်ခံရမယ့် အမှန်တရားပါပဲ။
အလုပ်အရမ်းကြိုးစားတဲ့ မဆုတ်မနစ် ချယ်လ်ဆီးခံစစ်
ချယ်လ်ဆီးဟာ တူဟယ်လ်ရဲ့လက်အောက်မှာ ၁၀ ပွဲကစား၊ ရှုံးပွဲမရှိတဲ့အပြင် ၈ ပွဲက Clean Sheet ရတဲ့အထိ ခံစစ်ကြောင်းက ပြောင်မြောက်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုအသင်းက အဲဗာတန်ကိုလက်ခံကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Clean Sheet နောက်တပွဲကို ထပ်ယူခဲ့တယ်။ အလုပ်အရမ်းကြိုးစားပြီး မဆုတ်မနစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးရဲ့ ခံစစ်မာကျောမှုက တူဟယ်လ်ရဲ့ အသီးအပွင့်တွေဖြစ်လာတယ်။ သူ့အတွက်လက်သီးလက်မောင်းတန်းချင်စရာပါ။ ခံစစ်မှာ နောက်ခံအထိုင် ၃ ဦး ကစားကွက်နဲ့ တောင်ပံအစွန်လူတွေရဲ့လုပ်အားကို အားပြုကစားတဲ့ သူ့ရဲ့ကစားကွက်ဖွဲ့စည်းပုံက ချယ်လ်ဆီးခံစစ်ကို အခုလိုအဆင့်အတန်းရောက်လာစေခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့သင်ပြမှုအောက်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်း​က စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျကွင်းမှာ ပေးဂိုး သုညပါ။ အသိအမှတ်ပြုရမယ့် မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ အဲဗာတန်တိုက်စစ် ဦးကျိုးခဲ့သလို ချယ်ဆီးက တိုက်စစ်ကိုပါ ဒေါင်းတင်မောင်းတင်ကစားနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သာလွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီတာထွက်မှာ ကဲလ်ဗတ် လူဝင်ရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းစိုပြည်ပြီး အန္တရာယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အဲဗာတန်ဟာ ဂိုးတွေမြူးခဲ့တယ်။ သူဒဏ်ရာရပြီးနောက်ပိုင်း လက်ရှိအနေအထားနဲ့တော့ မိုးနဲ့မြေကွာသွားခဲ့ဖြစ်တယ်။ အားကိုးစရာ တိုက်စစ်မှုးပျောက်ဆုံးနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာ ဂိုးသွင်းဖို့ ရစ်ချာလီဆန် တဦးတည်းကို မှီခိုလာရလို့ တဖြည်းဖြည်း ဇယားအောက်ကိုဆင်းလာရတယ်။ ဒဏ်ရာခဏခဏရတဲ့ ဟာမီးစ် ရိုဒရီဂွက်ဇ်ရဲ့ မပါဝင်နိုင်မှုကလည်း အဲဗာတန်တိုက်စစ်ကို အကျအဆုံးများစေပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ ​နေရာလုတိုက်ပွဲမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တနေရာနဲ့ထိုက်တန်ကြောင်းပြသတဲ့ ချယ်လ်ဆီး
အဆင့် ၄ နေရာနဲ့ အဆင့် ၅ နေရာကအသင်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ ဒီပွဲမှာ နိုင်သူစားစတမ်းဆိုတဲ့ အခြေအနေပါ။ ချယ်လ်ဆီးကဒါကိုသက်သေပြခဲ့တယ်။ အဲဗာတန်ကိုအနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တနေရာနဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်း လက်ခမောင်းခတ်ပြလိုက်တယ်။ ချယ်လ်ဆီးက အဆင့် ၄ နေရာကို တက်လာပြီ။ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် တိုက်ပွဲက အခုထက်ပိုပြင်းထန်လာပါဦးမယ်။ လီဗာပူးလ်က ဆက်တိုက်ရှုံးနေတယ်။ ဝက်စ်ဟမ်းက ပွဲကျန်ကစားဖို့ ရှိနေသေးတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအတွက် အ​ခြေအနေအားသာနေတယ်။ အဲဗာတန်ရဲ့လက်ကျန်ပွဲက ချယ်လ်ဆီးကို ပြန်ကျော်ဖြတ်လို့ရတဲ့ အနေအထားရှိပေမယ့် ခြေစွမ်းထိုးတက်နေတဲ့ ချယ်လ်ဆီးက လာမယ့် ဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ လိဒ်စ်တို့ကို အနိုင်ကစားပြီးတဲ့အခါ အဆင့် ၄ နေရာနဲ့ ပိုထိုက်တန်တဲ့ အသင်းအဖြစ် ရပ်တည်လာဖို့သာ ရှိပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ သူကအလုပ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ခဲ့ပြီး သေသေသပ်သပ်လေး ကစားပြခဲ့တယ်။ မေဆန်မောင့်နဲ့နေရာမှာ ကစားခွင့်ရလာတယ်။ ရတဲ့ ပွဲထွက်အခွင့်အရေးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုပ်ကိုင်ပြီး အဲဗာတန်ဧရိယာထိပ်မှာ ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့တဲ့ ခိုင်ဟာဗတ်ဇ်က ကိုယ်တိုင် တဂိုးသွင်းယူခဲ့ပေမယ့် ဒိုင် ဒေးဗစ်ကူတီရဲ့ ပယ်ဖျက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရလို့ နစ်နာခဲ့ရတယ်။
အဆင့် ၂ နေရာကို တူဟယ်လ် ချိန်နေပြီလား?
ချယ်လ်ဆီးရဲ့အထက်က အသင်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် မန်စီးတီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါ အဆင့်၂ နေရာအထိ လှမ်းခုန်တက်လို့ရတဲ့ ခရီးလမ်းကြောင်းက ဖြောင့်ဖြူးနေတာတွေ့ရတယ်။ သာမန် အဆင့်၎ အတွင်းဝင်ရုံနဲ့ ကျေနပ်မလား၊ ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့် ၂ နေရာအထိ သိမ်းပိုက်မလားဆိုတာကို တူဟယ်လ် ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိခြေစွမ်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားပြီး လက်ကျန် ၁၀ ပွဲမှာ ရမှတ်အများဆုံးစုဆောင်းသွားနိုင်ရင်တော့ အသင်းရဲ့ရာသီသိမ်းက အခုထက်ပိုလှပဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အခြားအသင်းတွေထက် လူစာရင်း ပိုတောင့်တင်းနေတယ်။ တူဟယ်လ်ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားနေပြီဆိုရင်တော့ အဆင့် ၂ နေရာအထိ ချယ်လ်ဆီးကိုပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဘဝအစက မျက်နှာပန်းလှပြီး ပြောစမှတ်ဖြစ်လာပါစေလိမ့်မယ်။